शिलापत्र बहस विचार
डा. युवराज संग्राैला काठमाडाैं, २७ वैशाख
हामीले शिलापत्रडटकममा प्रत्येक महिना एउटा विषयमा बहसको थालनी गरेका छौं । बहसको श्रृखलामा अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले ‘नेपाली सन्दर्भमा मार्क्सवादमा आधारित समाजवाद’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकाथिए । यसपटकको बहसमा 'संघीयताः सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कार्यान्वयन’ विषयमा पूर्व प्रधामन्त्री तथा तत्कालिन सवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको ‘संघीयतालाई भ्रष्टीकरण गरियो’ शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थियाैं । डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यपत्रमाथि पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्राैलाकाे टिप्पणी प्रस्तुत छ ।अन्य टिप्पणी पनि क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौं ।
नेपालमा पुनःसंरचनाका थुप्रै आधारबारे बहस भए । तर, बाबुुराम भट्टराईको संघीयतासम्बन्धी अवधाणा उल्टो मात्र होइन, खतरनाक पनि छ । संघीयताबारे ११ प्रान्तको अवधारणा भारतको हो भने एथिनिक स्टेटको (जातीय) नारा पश्चिमाको हो । पहाडमा धेरै प्रान्त र मधेसमा एक प्रान्त इन्डियन स्टाबलिसमेन्टको हो ।
बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राईसहितको समाजवादी पार्टी सीके राउतको विकल्पमा एक मधेस माग्न बनाइएको शक्ति हो । बाहुन, जनजाति र मधेसीसहितको पार्टीबाट एक मधेसको माग स्थापित गर्ने भारतीय अग्रसरता हो । मधेसलाई एक बनाउने भारतीय सुरक्षा रणनीति पनि हो । जातीय राज्य र क्षेत्रीय राज्य बनाउँदै चीनलाई घेरा हाल्ने पश्चिमा रणनीतिसमेत हो ।
सीके राउत पश्चिमा ब्लकले अगाडि सारेका व्यक्ति हुन् । उनले एक मधेस एक प्रदेशभन्दा चीनलाई घेरा हाल्ने नीति लिएका छन् । तर, बाबुरामले माथि १० र तल १ बलियो स्टेट भनेका हुन् ।
माथिका १० प्रदेशभन्दा तलको एउटै प्रदेश बलियो र आर्थिक रूपले सशक्त हुने भएपछि नेपाल भनेको मधेस नै हो भन्ने बनाउन उहाँहरु प्रयोग भइरहनुभएको छ । यसो भयो भने मधेस सधैं भारतसँग नजिक हुन्छ । जसले गर्दा भारतले नेपाललाई सजिलै आफ्नो पकडमा राख्न सक्छ भन्ने भारतको सुरक्षा रणनीति हो । संघीयताबारे बाबुरामले बोकेको एजेन्डा उहाँको होइन ।
विगतमा नेपालको माथिल्लो भागबाट चीनलाई इनसर्कल गर्न भारतको नर्थ इस्टर्न राज्यबाट अमेरिकीले सीके राउतमार्फत इम्पिमेन्ट गरेका हुन् । जस्तो भारतमा सन् १९६० र ७० को दशकमा नागाल्यान्ड, मणिपुर, मिजोरम आसाम र त्रिपुरामा जातीयताका आधारमा राज्य बनाइएको होइन । तर, अमेरिकी र ब्रिटिस गैरसरकारी संस्थाले जातीयतामा लगे । जातीय पहिचानबाट मात्र क्रिस्चियानिटीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर जातीय संघीयतामा लगे । भारतमा रहेको २ करोड क्रिस्चियन पपुलेसनमध्ये ८० लाख पपुलेसन यी राज्यमै छ । अहिले चीनलाई घेर्न भारतसँग नर्थ इस्टलाई अलग राखिएको छ । तर, यसरी बनाइएका जातीय राज्य भारतको झारखण्ड भन्दा पनि गरिब भए । यसरी जातीय राज्यले आर्थिक समृद्धि त ल्याउने रहेनछ । पश्चिमालाई आर्थिक समृद्धि र पहिचानको चिन्ता होइन । उनीहरू जातीय द्वन्द्वमा फसाएर मूल संस्कृति मास्न चाहन्छन् । यो कुरो बाबुरामजीहरुले बुझिदिनुभएन ।
जातीय पहिचानले व्यक्तिको आर्थिक सुधार नहुने रहेछ भनेर नर्थ इस्टले देखायो । मान्छेको संर्घष उसलाई चिनाउन मात्रै हो कि समृद्धिका लागि हो ? बाबुरामजी भनेको जातीय पहिचानको कुरोले मानिसलाई समृद्ध होइन, गरिब बनाउँछ ।
जातको नाममा प्रान्त धनी हुने भए मिजरोम किन गरिब भयो त ? समाज जति गरिब भयो, त्यति नै बढी संस्कृति र धर्ममा विग्रह हुन्छ ।
पहिलो संविधानसभामा पश्चिमाहरुले एनजीओमार्फत जातीयताका मुद्दा बाबुरामजीहरुलाई पढाएको अहिले पनि गडेरै बसेको रहेछ । जातीय कल्स्टर मिलाएर संघीयता बनाउने बाबुरामको कुरा लम्फु प्रतिक्रिया हो, वैज्ञानिक हुन सक्दैन ।
नेपालको सन्दर्भमा भारत र पश्चिमाको क्रस कटिङ रणनीति देखिन्छ । पश्चिमाले जातीय मुद्दा उठाउँदा भारत साइलेन्ट बस्छ किनभने पश्चिमाकै कारण सिक्किम भारतले लिन पाएको हो । नेपाल अस्थिर हुँदा चीनलाई हानि हुने हो । जब भारतीयको राजनीतिक प्रभाव बढ्छ, पश्चिमाका मुद्दा भारतीय च्यानलमार्फत बोकाइन्छ ।
राजनीतिक अग्राधिकारसहितको राज्य बनाउने कुरो पनि फेल भइसकेको सिद्धान्त हो । अमेरिकी राजनीतिज्ञ जोन रावले राजनीतिक समानताबिना विकास सम्भव छैन भने । त्यसकारण, उनी अवसरमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । तर, अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लीज यसलाई वाइयात सिद्धान्त भनेका छन् ।
साम्राज्यवादीले स्थानीय स्रोत प्रयोग गर्न मानिसलाई जातका आधारमा विभाजन गरेर एथिनिक कुरा ल्याएको प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर एमी चुवाले जोन रावको सिद्धान्तलाई खारेज गरेकी छन् । अमरत्य सेनले पनि जोन रावले भनेजस्तो एथिनिक पहिचानबाट मात्रै विकास हुने भए भारत स्वर्ग हुनुपर्ने र चीन रसातलमा जानुपर्ने भन्दै विरोध गरे ।
कतार, चीन, कोरियाजस्ता देशले विकास गर्दा राजनीतिक समानताको कुरा उठेन । संसारभर देखिएको इकोनोमिक ट्रेन्डमा एथेनिक कुरा गलत सावित भइसक्दा पनि बाबुरामजीलाई कति प्रिय लागिरहेको हो ? किन चाहियो जातीय पहिचान ?
माओत्सेतुङले राजनीतिको उद्देश्य जनताको सेवा गर्नु हो र सत्यबाट तथ्य खोज्नुपर्छ भने । अहिले जनाताले अशोक राईको कुरा सुन्छन् कि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शेरधन राईका कुरा सुन्छन् ? प्रदेश १ मा जाँदा जनताले शेरधनलाई मात्र प्रधानमन्त्री देख्छन्, पोखरा जाँदा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई देख्छन् ।
वर्तमान सरकारको असफलता त राजनीतिक होइन, आर्थिक असफलता हो । अहिले जातीय राजनीति छैन । बाबुराम भट्टराई दौरा सुरुवाल लगाएर मानेभन्ज्याङदेखि कञ्चनपुरसम्म पुग्दा उहाँले नै भन्या होइन, जनता गरिब छन् । संघीयताले मात्रै निकास दिने रहेनछ । मानिसलाई समृद्धि चाहिएको छ ।
उहाँलाई सोध्नुपर्यो– मानेभन्ज्याङदेखि कञ्चनपुरसम्म कति जनाले उहाँसँग जातीय राज्य मागे ? गरिबीको अवस्था उहाँले देख्नुभयो । तर, सत्तामा आउनलाई उहाँले यो पुरानै मुद्दा फेरि उठाउनुभयो ।
अहिले प्रदेश २ लगायतको असन्तुष्टि सीमा साँध नमिलेर होइन, केन्द्रले असहयोग गर्यो भन्ने हो । यस्तै हुने हो भने ७ होइन ११ प्रदेश बनाए पनि असन्तुष्टि कायमै रहन्छ । अहिलेको तनाव केन्द्र र प्रदेशबीच सम्बन्धको अनविज्ञतासँग सम्बन्धित छ । केन्द्रमा बस्नेलाई प्रदेश र मुख्यमन्त्रीभन्दा ‘म ठूलो हुँ’ भन्ने लाग्दो रहेछ । अनि ठूला ठूला सडक आफंै उद्घाटन गर्न खोज्ने, आफ्नै योजनामा पार्न खोज्ने ! यो समस्या आर्थिक पाटोसँग जोडिएको छ । अहिले व्यक्ति केन्द्रीयताको समस्या हो ।
प्रान्त एक्टिभेट नगर्ने, शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने अनि क्लस्टर नमिलेका कारण जातीयताका आधारमा संघीयताको पुनःसंरचना खोज्ने ? प्रान्तका मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता नै मिलेन । प्रदेश १ मा जोगबनीदेखि धरानसम्मको मोनो रेल आवश्यक हो कि त्यहाँको गरिबलाई सहयोग ? पोखरामा पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार खोज्ने हो कि वेश्यावृत्तिलाई लिगलाइज्ड गर्ने हो ? प्रादेशिक योजना र प्रादेशिक विकास अवधारणा बनाउन क्लस्टरले कहाँनेर रोक्यो ?
जातीयताको कुरा बिलाइसक्यो । अब पनि जातीय कुरा आयो भने देश नयाँ द्वन्द्वमा जान्छ । इतिहास आआफंै बनाउने कुरो रहेछ । बाबुरामजीलाई यसैमा इतिहास बनाउनु छ भन्ने लाग्छ भने म के भनूँ ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २७, २०७६, ०३:४२:००
नेपाल–तिब्बत कोराला नाकामा जे देखिए